John Zagame oo u ololeeya dawladda Federaalka ee Somaliya oo si weyn u dhaliilay kaalinta dawladda Maraykanka ee Somaliya. – Radio Daljir
John Zagame oo u ololeeya dawladda Federaalka ee Somaliya oo si weyn u dhaliilay kaalinta dawladda Maraykanka ee Somaliya.
New York June 26 – John Zagame oo ah nin Maraykanka ah oo u ololeeya dawladda Fedaraalka ee Somaliya ayaa si weyn ugu eedeyey waddanka Maraykanka iyo QM in ay ka gaabiyeen wax ka qabashada mashaqada dalka Somaliya, waxana uu sheegay in guul-darrada Maraykanka iyo QM aanay u baahnayn wax sharraxaad ah.
Md. John Zageme oo maamula shirkadda Park Strategies ayaa in dhawaalaba ugu baaqayey maamulka M/weyne Obama in uu xoojiyo ama difaaco jagada ra?iisul-wasaarihii is-casilay ee Maxamed C/laahi Farmaajo, waxana uu sheegay in Farmaajo lagu qasbay in uu xilka tiriyo, isagoo si weyn u canaantay dawladda Maraykanka soo dhaweynta heshiiskii Kampala.
Dawladda Maraykanku waxaa ay soo dhaweysay heshiiskii Kampala, is-casilaaddii Farmaayo iyo magacaabista R/wasaaraha cusubba iyadoo ku tilmaamnay tallaabo wanaagsan.
Md Zageme ayaa ku tilmaamay jawaabta Maraykanku ka bixiyey is-casilaaddii Farmaajo mid jilicsan, waxaana isagoo hadalka Maraykanka ku halqabsanayana uu yiri ?waan ku faraxsanahay is-casilaaddii ra?iisul-wasaaihii aqoonta iyo xirfadda lahaa, ee daacadda ahaa ee laysku halayn karay siduu qaran u dhiso, runtii waa hadal maran ama kalaam faaruq”.
Waxaana uu raaciyey intaas ?Maraykanku waxa uu dhumiyey fursad dahabi ah, si uu u taageero nin xoog badan oo is-bahaysi xoogan ah waa Maxamed C/llaahi Farmaajo marka la eego ololihiisii uu ku xaaqayey Al-shabaab islamarkaana ku abuurayey Somaliya oo deggan oo dimuquraadi ah?.
Park Strategies oo uu Md. Zagame ka mid yahay madaxdeeda, una ololaysa fursadaha siyaasadeed, ayaa sannad ka hor heshiis la gashay xukuumadii R/wasaare Farmaajo.